အွန်လိုင်းကာစီနို ၊ အွန်လိုင်း ဘောလုံးလောင်းခြင်း ၊ငါးပစ်ဂိမ်း ၊ စလော့ဂိမ်း မျိုးစုံဝန်ဆောင်မှု
WM casino ( new release)
By Ibet369 December 06, 2020
ibet369 မှ အသစ်ထပ်မံ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော လိုက်(ဖ်)ကာစီနိုဂိမ်း အသစ် WM Casino L ive Casino ဆော့ကစားရတာ နှစ်သက်တဲ့ bro တွေအတွက် ရွေးချယ်စရာတွေ များပြားလာပါပြီနော်။မိမိကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ လိုက်ကာစီနို ကို စိတ်တိုင်းကျ ရွေးချယ်ကစားနိုင်ပါပြီ။ ၂၄ နာရီ ငွေသွင်း/ထုတ် ဝန်ဆောင်မှု ဆက်သွယ်ရန် Viber Link - http://ibet369.info/FrFNLF ဖုန်းနံပါတ် - 09 954427369
venus casino ဝန်ဆောင်မှု
By Ibet369 October 28, 2020
မင်္ဂလာပါရှင့် အိုင်ဘတ်၃၆၉ မှာ Venus Casino ကိုလည်း ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ရှင့်။ဘားခရက်၊ ကျားနဂါး၊ အံစာတုံး၊ ရိုးလတ် စသည်တို့ကို Delar အချောအလှလေးများနှင့် တိုက်ရိုက်လိုက်(ဖ်)ကစားရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်တကယ့်ကာစီနိုမှာ ကစားနေရသလိုမျိုး ခံစားချက်မျိုးရရှိစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ လူကြီးမင်းအနေနှင့်ကစားဖို့စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်ပါလင့်ကိုနှိပ်ပြီးဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်ရှင့်။လူကြီးမင်းအနေဖြင့် Viber account ရှိထားရပါမည်။၂၄/၇ ရက် ပိတ်ရက်မရှိ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါသည်။ ဆက်သွယ်ရန်နှိပ်ပါ
ibet369 မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော တောင်ပေါ်သား ရှမ်းကိုးမီး
By Ibet369 October 17, 2020
ibet369 မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော တောင်ပေါ်သား ရှမ်းကိုးမီး မင်္လာပါရှင့် အိုင်ဘတ်၃၆၉ အွန်လိုင်းဂိမ်းတွင် ငါးပစ်ဂိမ်း၊ စလော့ဂိမ်း၊ live ကာစီနို နှင့် ဘောလုံး ကစားခြင်းတို့အပြင် တောင်ပေါ်သားရှမ်းကိုးမီးဂိမ်းကိုပါ ကစားလို့ရနေပါပြီ။အပြင်မှာ လူစုစရာမလိုဘဲ ဖုန်းတစ်လုံးနှင့် အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် အိမ်မှာနေပြီး သက်တောင့် သက်သာ ကစားလို့ရနေပါပြီ။ရှမ်းကိုးမီး အပြင် ဘူးကြီးနဲ့ ငါးပစ်ဂိမ်းကိုလည်း ဆော့လို့ရပါသေးတယ်ရှင့်။ ၁ယူနစ် ၁ကျပ် ပဲကျသင့်မှာဖြစ်ပြီး မန်ဘာသစ်များအတွက် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းဘောနပ် လည်းစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ရှင့်။အနည်းဆုံး ၅၀၀၀ ကျပ်မှ စသွင်းကစားနိုင်ပါသည်။ ငွေသွင်း/ထုတ် ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ၂၄ နာရီ ပိတ်ရက်မရှိဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါပြီ။ ဆက်သွယ်ရန် Viber : 09 888060880
By Ibet369 October 04, 2020
အွန်လိုင်းငါးပစ်ဂိမ်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ အွန်လိုင်းငါးပစ်ဂိမ်းများအကြောင်း ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ငါးပစ်ဂိမ်း ဝါသနာရှင်တွေအတွက် စိတ်ချရတဲ့ ဂိမ်းဆိုဒ်တွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ပြောပြချင်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းငါးပစ်ဂိမ်းရယ်လို့ဖြစ်လာဖို့..... ငါးပစ်ဂိမ်းဟာ ဆင်းသက် လာခြင်း ဖြစ်ပြီး ငါးဂိမ်း သည်ယခု ကမ္ဘာအနှံ့ ပျံ့နှံ့ လျက်ရှိကာ လူတို့ကို ဆွဲဆောင်လွယ်၊ နားလည် လွယ်သော စည်းမျဉ်းများမှ တဆင့်ဆွဲဆောင်နေသည်။ စပေါ်လာချိန်မှာ ငါးပစ်ဂိမ်းဟာ ခုလိုမျိုး အွန်လိုင်းကနေဆော့လို့ရခြင်းတော့မရှိသေးပေ Slot Machingစက်များဖြင့် အကြွေစေ့များထည့်ကာ အပြင် ကစားဝင်းများမှာသာ ဆော့လို့ရခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်း အပြင်အားကစားရုံတွေမှာဆော့ရချင်းရဲ့ ဒုက္ခကလဲမသေးလှပေ တရားဝင်မဟုတ်တဲ့ ကစားရုံတွေဆိုရင် ကိုယ့်အတွက်ပါ အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အင်တာနက်တွေကျယ်ပြန့်လာတဲ့အချိန်ရောက်မှသာ ကာစီနိုဂိမ်းများဟာလဲ ဖြေဖြေးချင်း အွန်လိုင်းပေါ်သို့ပြောင်းလဲလာခဲ့ပြီး ယခုဆိုလျှင် ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနှင့် အပြင်မှာကစားရုံလိုက်ရှာပြီး သွားရောက်ကစားနေစရာမလိုတော့ပေ ကိုယ့်အိမ်ထဲကနေကစားရသည့်အတွက် အားသာချက်က မည်သည့်အန္တရာယ်မှ မဖြစ်သည့်အပြင်....ငွေသွင်းငွေထုတ်ပါ မြန
The Top Four Leagues in Football and Money and Sports
By Ibet369 September 13, 2020
The Top Four Leagues in Football and Money and Sports The Premier League is one of the highest leagues in English professional football clubs. It is also one of the main football matches in the UK, with 20 clubs competing. Each season kicks offatotal of 38 games and runs from August to May next year. It was known as the Premiership from 1993 to 2007 and is now known as the Barclays Premier League because it is sponsored by Berkeley Bank. And the current champion is Liverpool. Spain's Best League According to UEFA's league rankings, La Liga was the top league in Europe every seven years from 2013 to 2011, and as of 2010, it was leading Europe in 22 of the top 60 years. La Liga is one of the most popular professional sports in the world, with an average of 26,933 attendees for the 2018-19 season. La Liga is the sixth-highest of any domestic professional sports league in the world and the third-highest of any professional association football league in the world. The Bun
ေဘာလုံးေလာကရဲ႕ ထိပ္ဆုံးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေလးခု ႏွင့္ ေငြနဲ႔အားကစား
ေဘာလုံးေလာကရဲ႕ ထိပ္ဆုံးလိဂ္ၿပိဳင္ပြဲေလးခု ႏွင့္ ေငြနဲ႔အားကစား ပရီးမီးယားလိဂ္သည္ အဂၤလိပ္ ေၾကးစားေဘာလုံး ကလပ္အသင္းမ်ား၏ အျမင့္ဆုံးလိဂ္တစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၎သည္လည္း ယူေက၏ အဓိကက်ေသာ ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ကလပ္အသင္း ၂၀ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည္။ ရာသီပြဲမ်ားတြင္ စုစုေပါင္း ၃၈ ပြဲ ကန္ၿပီး ဩဂုတ္လမွ ေနာက္တစ္ႏွစ္ ေမလအထိ က်င္းပေလ့ရွိသည္။ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ ပရီးမီးယားရွစ္ပ္ဟု လူသိမ်ားၿပီး လက္ရွိတြင္ ဘာကေလစ္ဘဏ္မွ စပြန္ဆာျပဳလုပ္ေသာေၾကာင့္ ဘာကေလစ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ဟု ေခၚသည္။ လက္ရွိ ခ်န္ပီယံကေတာ့ လီဗာပူးအသင္း ျဖစ္သည္။ စပိန္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေကာင္းဆုံးလိဂ္ ယူအီးအက္ဖ္ေအ၏လိဂ္ကိန္းအဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအရ La Liga သည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ခုနစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္စီတြင္ ဥေရာပထိပ္တန္းလိဂ္ ႏွင့္ ဥေရာပအားေကာင္းသည့္အဆင့္ ၆၀ ရွိသည့္အနက္ အဆင့္ ၂၂ ုအထိ ဦး ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။La Liga သည္ကမာၻေပၚတြင္လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအနက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈-၁၉ ရာသီတြင္လိဂ္ပြဲမ်ားအတြက္ပ်မ္းမွ်လာေရာက္သူ ၂၆,၉၃၃ ျဖစ္သည္။ ၎သည္ကမာၻေပၚရွိမည္သည့္ျပည္တြင္းပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္အားကစားအသင္းတြင္မဆိုဆဌမအျမင့္ဆုံးျဖစ္
By Ibet369 September 08, 2020
Tennis Betting Tennis အားကစားဟာ လူႀကိဳက္မ်ားမႈမွာတင္မကပဲ ေလာင္းကစားေလာကမွာပါ အလွ်င္အျမန္ ႀကီးထြားလာေနပါတယ္။ ဒီလိုႀကီးထြားေနခ်ိန္မွာ ေလာင္းကစားဒိုင္ေတြကသတ္မွတ္တဲ့လိုင္းေတြဟာ မတည္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းအတြက္ေငြရွာဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ေတြ႕ရာနာမည္ကို ေလာင္းရံုနဲ႕ေတာ့ အျမတ္အစြန္းေတြမရႏိုင္ပါဘူး။ အႏိုင္ရရွိဖို႔ဆိုရင္ ေလ့လာရွာေဖြမႈေတြေတာ့ လိုအပ္ေနပါေသးတယ္။ ေလာင္းတဲ့ေနရာမွာ မွန္မွန္ကန္ကန္ျဖစ္ဖို႔ဆိုရင္ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္ေတြကို သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ မိတ္ေဆြတို႔ကို ရွင္းျပခ်င္ပါတယ္။ Tennis ၿပိဳင္ပြဲေတြကို အလောင်းအစား လုပ္ရတာဟာ အေျပာင္းအလဲအနည္းငယ္ကလြဲၿပီး အျခားေသာအားကစားၿပိဳင္ပြဲေတြလိုပါပဲ။ ဉာဏ္ရွိရွိေရြးခ်ယ္ပါ ၿပိဳင္ပြဲတိုင္းရဲ႕ပြဲစဥ္တစ္ခုစီတိုင္းကို သင္လိုက္ၿပီးေလာင္းေနစရာမလိုပါဘူး။ သင့္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲကိုပဲ အခ်ိန္ယူၿပီး ရွာေဖြပါ။လောင်းကစား ဟာ စိတ္လႈပ္ရွားစရာေကာင္းပါတယ္။ လူေတြဟာလည္း ေလာင္းကစားကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ပဲ သင့္ကိုအေလာင္းအစားျပဳလုပ္ဖို႔ ေသြးေဆာင္ေနမွာျဖစ္ၿပီး သင္သာ သင့္ေတာ္တဲ့ေလ့လာသင္ယူမႈေတြမလုပ္
basketball betting နည်းဗျူဟာ
Basketball Betting အတွက်သိထားသင့်သည်များ
Esports Betting လမ်းညွှန်
Ibet369 online betting
Ibet369 ဆိုဒ္တြင္ ေဘာလံုး ေမာင္းေလာင္းနည္း
Sport Betting အတွက် အကြံပေးချက်
Sports Betting အကြောင်းသိကောင်းစရာများ
ႈIbet369 ဆိုဒ္တြင္ ေဘာလံုး ေဘာ္ဒီ၊ ဂိုးေပါင္း ကစားနည္း
Baccarat ကစားနည်း Baccarat မှာလောင်းကြေးတင်ခြင်း Gambling Tips Live ကာစီနိုဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ Roulette ကစားနည်း Roulette ဆိုသည်မှာ venus casino ဝန်ဆောင်မှု ကျား၊ နဂါးကစားနည်း ကာစီနို ကစားသမားတိုင်းမှာရှိသင့်တဲ့ Skill6ချက် ကာစီနို စလော့ဂိမ်း လောကာမှာ ရေပန်းစားစေဖို့
online slot game အတွက် Tip တစ်ချို့1 ကာစီနို စလော့ဂိမ်း လောကာမှာ ရေပန်းစားစေဖို့1 ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့် စလော့ဂိမ်းအတွက် ပရိုမိုးရှင်းများ1 စလော့ဂိမ်းအတွက် ငွေကြေးစီမံမှု1
Fishing War ထဲမွ jackpot အေကာင္ေလးမ်ားအေၾကာင္း1 ငါးပစ်ဂိမ်းနှင့် စလော့ဂိမ်းအတွက် ပရိုမိုးရှင်းများ1 အွန်လိုင်းငါးပစ်ဂိမ်းစတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံ1 အွန်လိုင်းငါးပစ်နည်း1